Omunye ethuthumela futhi kujabulise izinsuku kakhulu umuntu ngamunye ngosuku lwakho lomshado. Nokho, bambalwa bayazi ukuthi ngaphambi umshado ngaphambili eRussia ngempela olwenziwa ukuzibandakanya, futhi kulolu suku ubhekwa njengebalulekile njengoba esibophezelayo oqondile kwesibopho somshado. Ngemva ukubandakanyeka - isimemezelo esingcwele kokuba kungokuvumelana we abathandi izinhliziyo ezimbili, ngemva kwalokho futhi akazange ayithole ilungelo ukubiza umakoti nomkhwenyana.
ERussia ubudala kube yilolu suku umhlangano onesizotha abazali Umkhwenyana nomakoti lapho banika isibusiso sabazali nokuthi bayakudinga yini ukuba aphile ukuphila okujabulisayo futhi eside. Ngu isiko, umkhosi benana isinkwa nosawoti phakathi kwabazali, bese imizuzu embalwa, kwathi cwaka. Ngaphambi dinner, indoda wanikeza yakhe ayithandayo enhle somshado ring nge netshe eliyigugu, okwathi ngemva kwalokho babuyela ugcobe umakoti nomkhwenyana. Engagement - lena usuku olubalulekile kakhulu ngaphambi komshado, ngakho abasha ukulungiselela ke ngokucophelela. Esikhathini imikhaya abacebile yizicukuthwane kulokhu wanikezwa, njengoba umthetho, ephathini kwakusihlwa noma ibhola, okuyinto umeme abantu abanethonya kusuka komakhelwane. Izivakashi wanika izipho umakoti ihalalisele abasha kanye nesinyathelo sokuqala entry ibe elingcwele lomshado.
hhayi namuhla abagubha ngawo ukuhlanganyela kusho zonke, futhi iningi umhlangano esemthethweni abazali senzeka ngalolo suku, ngemva kwalokho wahlela iqembu. umyeni Ikusasa unika umakoti wakhe indandatho yomshado kubonisa ukuthi izinhloso sina ukushada intombi yakhe. unkosikazi Ikusasa nabo bangase bakhiphe izinqumo omthandayo into okunenjongo ngoba kuye, uyakugcina isikhathi eside ngakho njengento ayokhunjulwa ngayo ngalolu suku olubalulekile ngaye. Eqinisweni, ukubandakanyeka - uhlobo ingxoxo ngenhloso ukuzivocavoca umshado intsha, ngoba izwi kusekelwe umqondo wegama elithi "khuluma", okusho collude. Abazali "eyingoduso" ukuba kuganiswe izingane zabo, bese ekugcineni eshiwo usuku lomshado.
Nokho, uma silitadisha isiko lwesiSlavic eduze kakhudlwana, kufanele wazi ukuthi ukubandakanyeka - lokhu akulona esigabeni sokuqala somshado. Ngaphambi kokuba ngisho wathatha beka sokuqomisana okuthiwa, lapho umyeni ithumela matchmakers umakoti esizayo isiphakamiso babe umshado.
Akufanele sibakhohlwe ukuthi ezinsukwini ubudala nakanjani, ngaphezu umshado, kanye lomshado kwenziwa ngisho eBandleni abasha. isizwe sethu bekulokhu kuwukuthi kusukela ezikhathini zasendulo ozinikele, ngakho- ukukholelwa kuNkulunkulu is ngokwesiko libhekene iningi labantu. Kuyaphawuleka ukuthi iBhayibheli alisho lutho mayelana isiko ukubandakanyeka ukuthi kuphakamisa abefundisi abaningi bathi lo mkhosi wabonakala ngesikhathi esizayo. Ngesikhathi esifanayo, kukhona ulwazi ngisho lwamaSlav lasendulo ngaphambi kwenkathi kobuKristu eRussia ayesevele amasiko, ezazihlanganisa esungulwe ngenkani leli siko.
Engagement eBandleni siqondwa njengoba isimemezelo sikaNkulunkulu futhi ukuzinikela kwayo yokuzithandela ukuba ishade bese iyaqhubeka ukunikeza umshado isifungo. Kuyaphawuleka ukuthi lapha abazali abakwazi khona, ngoba into esemqoka kule nqubo - ukwazisa Nkulunkulu mayelana nobulukhuni izinhloso zakhe. Ngosuku lomshado, amakholwa amaningi, abantu abasha ukuba isiko ibandla isithembiso, ngemva kwalokho-ke kubhekwa ukuthi umakoti nomkhwenyana zihlobene nge umshado impilo yakho yonke, futhi UNkulunkulu ungufakazi.
Ezindaweni ezihlukahlukene zezwe kwadingeka izici zayo siqu kanye namasiko lwekucocisana, kodwa ngokuvamile, akashintshi okushiwo umcimbi. Namuhla, akubona bonke abantu abasanda kushada ukugubha lolu suku ngoba abantu abaningi abazi nokwazi ukuthi ukubandakanyeka ezinjalo. Naphezu ukulahlekelwa kancane kancane isiko, bonke abantu kufanele ukhumbule futhi uqaphele yale mikhosi, ngoba amasiko ethu ukuthi kumelwe alondoloze udlule lokuxoxela izizukulwane ezizayo.
Ubangela, ekwelapheni inabukeni amawala kwezinhliziyo zezinsana zokuvimbela
Kanjani ukuthandana nentombazane obonakala ingekho?